Ungasifumana njani isitayile seCSS esingasetyenziswanga kwistayile sakho | Martech Zone
Nangona izitayile zakho zigciniwe, okokuqala xa umntu etyelela indawo yakho kwifayile yeCSS evaliweyo unokuyicothisa indawo yakho. Oku akulunganga kakhulu kuluvo lokuqala. Njengoko iisayithi zikhula, zihlala zanda ngeewijethi ezintsha kunye nezinto abathi abaqulunqi baqhubeke nokuzilolonga ngakumbi nangakumbi nangaphezulu. Ixesha elingaphezulu, iphepha lakho lesitayile linokudumba kwaye libe yinxalenye ephambili kutheni ukhuphelo lwendawo yakho lucotha kunabanye.
Ndizibonile ezinye izixhobo zokuqinisekisa zeCSS kwiwebhu. Sisebenzise Coca iCSS ukunciphisa ubungakanani befayile ngokulungiselela ngcono kunye nokwenza idatha kuyo. Xa usebenzisa umntu wesithathu ukuhlalutya indawo yakho, kuya kufuneka ulumke, nangona kunjalo. Ukuba bakrwela iphepha elinye kwaye bahlalutye i-CSS yakho, isixhobo sinokuthi ususe ukunciphisa iitoni zezitayile ezisetyenziswa kwamanye amaphepha.
Akunjalo nge ICSS engasetyenziswanga -Isixhobo esisebenzayo UAndrew Baldock Ukusuka kwiMindjet, a imephu yengqondo isicelo, sandibonisa izolo. Isixhobo sikhasa indawo yakho kwaye sichonga i-CSS engasetyenziswanga. Ungajonga nezitayile ofuna ukuzigcina ngaphandle kohlalutyo. Ukuyikhupha phezulu, unokuzikhuphelela istayile emva kokuqhutywa kwendlela yesiqhelo.
Douglas Karr Kumda weRadiyo yeWebhu
Agasti 15, 2012 kwi-3: 41 AM
Agasti 15, 2012 kwi-3: 42 AM